वर्ष २००:: समर्पित उपकरणहरू राख्नको लागि ट्विटर पर्याप्त महत्त्वपूर्ण थियो ग्याजेट समाचार
२००:: ट्विटर समर्पित उपकरणहरू हुनको लागि पर्याप्त महत्त्वपूर्ण थियो
ट्विटर २०० 2006 मा संसारमा बाहिर निस्के। यद्यपि, यदि मलाई नराम्रो याद आयो भने, त्यसको अर्को साल मैले यसको अस्तित्वको बारेमा थाहा पाएँ। यो तब हो जब मैले मेरो व्यक्तिगत खाता खोल्दा त्यो के हो भनेर राम्ररी जानेन। ¿मलाई भन्नुहोस् अब म के गर्दै छु? केवल पाठ राख्ने हो? म कसलाई पछ्याउँदै छु? यो सबैले मलाई ट्विटरले वास्तवमा के गर्ने भनेर छक्क पार्छ। मैले यो पार्क गरे।
यद्यपि, एक बर्ष पछि, ट्विटरसँग धेरै सान्दर्भिकता हुन शुरू हुन्छ। र लामो समय सम्म एक सामाजिक नेटवर्क को रूप मा धेरै संकेत गरीन्छ, तर एक द्रुत संचार च्यानलको रूपमा जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई विश्वको कुनै पनि कुनामा के हुँदैछ जान्न दिन्छ। पूर्ण २०० 2008 मा, बेइजि Olympic ओलम्पिक खेलहरू आयोजना गरियो। र विजेताहरूको रेकर्ड र भिडियोहरू ट्विटरमा प्रसार गर्न थाले; त्यो हो, प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको सन्देश छोडे र एउटा लि wanted्क संलग्न गरियो जुन तिनीहरू लिंक गर्न चाहन्छन्। यो पनि यो भन्न सकिन्छ कि यो एक तरिका थियो माइक्रोब्लगिंग.
ट्विटरको प्रासंगिकता र प्रयोग बढ्दै गयो र कम्पनीहरूले यस सञ्चार च्यानलको महत्त्व बुझ्दै उनीहरूको केकको आफ्नै टुक्रा प्राप्त गर्न चाहन्छन्। तसर्थ, केहि कम्पनीहरूले उपकरणहरू सुरूवातमा पनि शर्त लगाउँदछ कि मात्र प्रयोगकर्ताले उनीहरू जहाँ भए पनि उनीहरूको सन्देशहरू सुरूवात गर्न अनुमति दिए। र यसैले ट्विटरपीक.
1 तपाईंको हातको हत्केलामा ट्विटर ब्ल्याकबेरीको हावाको साथ
2 ट्विटरपीक दुई संस्करणमा
तपाईंको हातको हत्केलामा ट्विटर ब्ल्याकबेरीको हावाको साथ
पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्नु अघि, यो याद गर्नुपर्दछ कि तबसम्म स्मार्टफोन कसरी ब्ल्याकबेरी मिडिया ताराहरूसँग धेरै लोकप्रिय थियो। एक पूर्ण शारीरिक किबोर्ड र इ-मेल प्रबन्ध गर्न सक्षम हुन स्थिर इन्टर्नेट जडानमा शर्त रहेको फोनहरू, साधारण प्रयोगकर्ताले चाहेको अधिकतम हो। त्यसकारण, उनीहरूले अवलोकन गर्न एक बेन्चमार्क थियो - कम्तिमा जहाँसम्म डिजाइनको सवाल छ - र ट्विटर मुख्य दावीको रूपमा, एक ग्यारेन्टेड सफलता देखिन्थ्यो। अरू के छ, ट्विटरपिकमा साइड रूलेट हुनेछ जुन ब्ल्याकबेरी विश्वभर प्रसिद्ध भयो।
El ट्विटरपिक एक संस्करण थियो जुन २०० November नोभेम्बरमा आएको थियो। यद्यपि कम्पनीसँग पहिले नै यसको बेल्ट मुनि पेक थियो, सक्कली मोडेल जसले तपाईंलाई आफ्नो ईमेल प्रबन्ध गर्न उपकरणको साथ अनुमति दिन्छ। अवश्य पनि, यसले केवल यसको लागि सेवा गर्‍यो; योसँग एकीकृत टेलिफोन थिएन। तसर्थ, यो पीडीए भन्दा नजिक थियो स्मार्टफोन.
ठिक छ, ट्विटरपिक २०० Pe को यस पीकको संस्करण थियो तर ट्विटरमा यसको प्रयोगमा मात्र केन्द्रित। उपकरणले तपाइँलाई तपाइँको खातालाई सामाजिक नेटवर्कमा प्रबन्ध गर्न अनुमति दियो, केवल "ट्वीटहरू" पठाउन सक्षम मात्र होइन तर तपाईंलाई नेटवर्कको अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रियाको समयमा पनि सूचित गर्न सकिन्छ। त्यसकारण, यो क्षणको पहिलो «सोशल मीडिया» उपकरणको रूपमा प्रस्तुत गरियो। यद्यपि यसमा केहि प्रतिबन्धहरू थिए: यसले फोटोहरू संलग्न गर्न सक्दैन (यसमा क्यामेरा छैन) र यसले ब्राउजरमा पृष्ठहरू खोल्दैन (यससँग छैन)।
ट्विटरपीक दुई संस्करणमा
हामी पनि उस्तै याद गरौं स्मार्टफोन उनीहरूको बजारमा त्यस्तो उपस्थिति थिएन र २०१० सम्म स्टीव जॉब्स टर्मिनल प्रस्तुत गर्न मंचमा देखा पर्‍यो जुन अन्ततः स्मार्टफोन बजारमा क्रान्ति ल्याउँदछ। अर्को तर्फ, यो TwitterPeek संयुक्त राज्य अमेरिका मा विशेष रूप मा शुरू गरिएको थियो र मूल्य थियो १०० वा २०० डलर (85 170 वा १ XNUMX० यूरो क्रमशः)। यो मूल्य मा डाटा दरहरू जुन months महिना वा असीमित दर हुन सक्छ.
यद्यपि बर्ष जसै बित्यो - केहि महिना पछि - आईफोन क्रान्ति शुरू भयो। सामसु Galaxy ग्यालेक्सी परिवारको अतिरिक्त। को उपयोग स्मार्टफोन यो द्रुत रूपमा विस्तार गर्न सुरु भएको थियो। र डाटा दरले इन्टरनेट ब्राउज गर्नका लागि थप सुविधाहरू पनि प्रदान गर्‍यो। त्यसकारण, ट्विटरपिक प्राप्त गर्ने भावना अब थिएन। स्मार्टफोनले पीकको उत्पादन आवश्यकताहरू पूरा गर्‍यो। यी हुन्: वेब ब्राउजर, क्यामेरा, ईमेल प्रबन्ध गर्ने क्षमता, र प्रयोगमा अचम्मको सहजता - तपाईंलाई अब भौतिक कुञ्जीपाटी चाहिएको थिएन र तपाईंले आफ्नो औंलाहरू सबै गर्न प्रयोग गर्नुभयो।
एक जिज्ञासु नोट को रूपमा, फेसबुकले पनि यस्तै प्रयास गर्‍यो, तर - त्यस पछि - शक्तिशाली HTC को मोडेलहरूको साथ। यो फिजिकल बटन थप्न भनिन्थ्यो जुन थिच्दा सीधा सामाजिक नेटवर्क बराबर हुन्छ। यी आविष्कारहरूले पनि केहि बिक्री छोडे।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सामाजिक नेटवर्क » २००:: ट्विटर समर्पित उपकरणहरू हुनको लागि पर्याप्त महत्त्वपूर्ण थियो
चीन मध्यम अवधिमा अन्तरिक्ष दौड नेतृत्व गर्न चाहन्छ
सौर्य ऊर्जा बिना तपाईंको घरको छानामा प्लेटहरू स्थापना गर्न